Bazobuyiselwa emsebenzini abakwa-MTN | isiZulu
Bazobuyiselwa emsebenzini abakwa-MTN
Awugwazanga uMTN - Isikhulu
Uvulelwe icala uMTN
INigeria ihlawulise abakwaMTN
Johannesburg - Inkampani yezokuxhumana yakwaMTN seyiyalelwe ukuthi ibuyisele abasebenzi abayisishiyagalolunye, abaxoshwa ngenyanga kaSepthemba ngonyaka owedlule, kusho inyunyana iCommunication Workers' Union.
Abaxazululi bezindaba zabaqashi nabasebenzi iCommission for Conciliation, Mediation, and Arbitration itshele le nkampani yomakhalekhukhwini ukuthi ayikhiphe isinxephezelo sezinyanga eziyi-12, inike abasebenzi abaxoshwa.
"Inkampani yaxosha laba basebenzi ithi baqamba amanga bethi bangaphansi kwenyunyana i-CWU, baphinde banyuselwa amaholo bathola nemihlomulo ngendlela engumgunyathi, phakathi kuka-Ephreli, Meyi nangoJuni ngo-2010."
Inkampani yabeka kambi abasebenzi, nokwenza kwaba nzima ukuthi baqashwe ngeziye izinkampani.
Inyunyana i-CWU yaphikisa lokhu kuxoshwa kwabasebenzi, abakwa-MTN bebengakatholakali ukuthi baphawule ngalolu daba.